'...मुस्किल छ पोखरामा' गायकलाई ८ प्रश्न - संवाद - नेपाल
'...मुस्किल छ पोखरामा' गायकलाई ८ प्रश्न
तपार्इंको फ्यान क्रेज कस्तो छ ?
सर्वाधिक व्यस्त गायकमध्ये पर्छन्, प्रमोद खरेल । एकमहिने अमेरिका यात्राबाट साउन दोस्रो साता स्वदेश फर्किएका उनी अहिले कन्सर्ट र गीत रेकर्डमा व्यस्त छन् । सबैभन्दा बढी गीत रेकर्ड गराउने गायकमा पर्ने खरेलले आधुनिक र चलचित्रका गीत गाएर दर्शक–श्रोतालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनी स्वदेशमै हुँदा प्रतिमहिना झन्डै एक सय गीत रेकर्ड गराउँथे । जहाँ सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिन्छ, त्यहाँ उनका गीतमा ‘वान्समोर’को आवाज गुन्जिन्छ । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म फ्यान छन् उनका । गीत रेकर्डिङमा व्यस्त रहेकै बेला गायक खरेलसँग गरिएको कुराकानी :
तपाईं अहिले केमा व्यस्त ?
अमेरिकाको एकमहिने सांगीतिक यात्रा सकेर साउन दोस्रो साता नेपाल आइपुगेँ । अहिले गीत रेकर्डमा व्यस्त छु । दैनिक कम्तीमा दुईवटा र बढीमा चारवटासम्म गीत रेकर्ड हुन्छन् । बिहानदेखि राती अबेरसम्म रेकर्डिङमै व्यस्त रहन्छु । लामो समय बाहिर भएकाले गीत रेकर्डका लागि मलाई कुरेर बस्ने धेरै थिए ।
गीत रेकर्डका लागि तपाईंलाई धेरै खोज्नुको कारण ?
मलाई धेरै खोज्नुको कारण त थाहा भएन । तर, दर्शक–श्रोताले धेरै माया गर्नुभएको छ । उहाँहरूकै साथ–सहयोगले आज गायकका रूपमा स्थापित छु । अधिकांश दर्शक/श्रोताले तपार्इंको गीत राम्रो लाग्यो भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा सन्देश पठाएर तारिफ गर्नुहुन्छ ।
यति व्यस्त गायकको अहिलेचाहिँ कन्सर्ट छैन ?
म अहिले गीत रेकर्डिङ र कन्सर्ट दुवैमा व्यस्त छु । गीत रेकर्ड गरेर केही समयअघि पोखरामा आयोजित कन्सर्टमा सहभागी हुन पुगेँ । झरी भए पनि दर्शकको सहभागिता उल्लेख्य थियो । आधुनिक गीतमा दर्शक–श्रोताको क्रेज छ । अहिले वर्षात्को समयमा कमै सांगीतिक कार्यक्रम हुन्छन् । बाराको सिमरा र विराटनगरमा आयोजना हुने कन्सर्टका लागि निम्तो आइसकेको छ । गीत रेकर्ड सकेर जाने योजनामा छु ।
समय कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
विदेशमा आयोजना हुने सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा गीत रेकर्ड गर्न समय मिल्दैन । विदेश यात्रा प्राय: लामै हुन्छ । तर, नेपालमा हुँदा भने गीत रेकर्ड र कन्सर्टमा बढी सहभागी हुन्छु । कन्सर्टको समय हेरेर रेकर्डका लागि समय व्यवस्थापन गर्छु ।
अहिलेसम्म कति गीत रेकर्ड भए ?
हिसाब राखेको छैन । लाग्छ, दुई हजारभन्दा बढी गीत रेकर्ड भएका छन । आधुनिक गीत धेरै गाएको छु । चलचित्रमा पनि गीत गाउने अफर धेरै आउँछन् । त्यसलाई नकार्दिनँ । चलचित्रमा मात्रै दुई/तीन सय गीत रेकर्ड भइसके । आधुनिक र चलचित्र दुवैमा गाएका गीत दर्शक–श्रोताले मन पराउनुभएको छ ।
तपार्इंलाई कुन गीतले चिनाएको भन्ने लाग्छ ?
०६७ मा प्रणय एल्बममा गाएको गीत ‘मबिना कसैकसैलाई....’ सुपर/डुपर हिट भयो । मलाई सांगीतिक क्षेत्रमा गायकका रूपमा यही गीतले चिनायो । जहाँ गए पनि दर्शक–श्रोताबाट यो गीत गाउने माग आउँथ्यो । गीत नसक्दै ‘वान्समोर’को आवाज गुन्जन्थ्यो । अहिले पनि यस गीतको क्रेज घटेको छैन । कन्सर्टमा मैले यो गीत चारपटकसम्म गाएको छु । अहिले पनि यो गीत दर्शक–श्रोताको जनजिब्रोमा झुन्डिरहेको छ ।
सधैँ व्यस्त तपाईं, परिवारलाई चाहिँ समय दिनुहुन्न ?
चार–पाँच वर्ष भयो । गीत रेकर्डमा बढी व्यस्त हुने गरेको छु । परिवारले मेरो पेसा बुझेको छ । सिजनमा जताततै आयोजना हुने कन्सर्टमा व्यस्त हुन्छु । चाडबाडसमेत भन्न पाइन्न । जहाँ मेला–महोत्सव हुन्छ, प्राय: त्यहाँ मेरो उपस्थिति रहन्छ । अहिले कन्सर्ट कम भएकाले शनिबार परिवारसँग बस्छु । क्रिकेट हेर्छु ।
म जहाँ जान्छु, त्यहाँ दर्शकको भीड देख्छु । कोही अटोग्राफ लिन आउनुहुन्छ । कोही सेल्फी खिच्न अघि सर्नुहुन्छ । फरक–फरक किसिमका दर्शक मेरा फ्यान हुनुहुन्छ । कतिपय फ्यान मलाई भेटेर मेरै गीत गाउनुहुन्छ । फ्यान क्रेज असाध्यै धेरै पाएको छु ।